Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngoMeyi | Izincwadi Zamanje
Uma ngaphambi kokuthi sikulethele ezintathu imincintiswano yezemibhalo kazwelonke ehlelelwe le nyanga kaMeyi, manje sikulethela okufanayo kodwa kulokhu okwamanye amazwe. Uma uthanda ukubhala futhi uzinikele kukho, qiniseka ukuthi ubheka okulandelayo imincintiswano yezincwadi yamazwe omhlaba ngoMeyi, mhlawumbe ukunqoba kwakho kukomunye wabo.
1 III UMKLOMELO WE-GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ WE-JOURNALISM (COLOMBIA)
2 Ama-78th HISPANIC AMERICAN FLORAL GAMES (IGUATEMALA)
3 I-XV FLORAL GAMES "YO TALLO MI DIAMANTE" (CUBA)
III UMKLOMELO WE-GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ WE-JOURNALISM (COLOMBIA)
Umklomelo: IDiploma, ukubaza kanye nezigidi ezingama-pesos zaseColombia ezingamashumi amathathu nantathu ($ 33.000.000)
Ukuhlela ibhizinisi: UGabriel García Márquez Foundation yeNew Ibero-American Journalism (FNPI)
Izwe lebhizinisi lokushaya: Colombia
Usuku lokuvala: 11/05/2015
El "Umklomelo Wezobuntatheli kaGabriel García Márquez" kubizwa ngenhloso yokubona kanye nokukhuthaza, ngesikhathi sezinguquko ezinqala kwezobuntatheli, ukufunwa kokwenza kahle, ukuqamba izinto ezintsha kanye nokuhambisana kokuziphatha kwezintatheli ezisebenza futhi zishicilele njalo ngezilimi zaseSpain nezesiPutukezi emphakathini IMelika, iSpain nePortugal.
Lo mklomelo wamazwe omhlaba ovela ku- UGabriel García Márquez Foundation yeNew Ibero-American Journalism (FNPI) Kungenzeka sibonge ukusekelwa kobumbano phakathi kwedolobha laseMedellín, eColombia, elizinikele enkululekweni yokukhuluma nokuhlonipha ukuzimela kwezintatheli, futhi elakhiwe yiHhovisi leMeya laseMedellín kanye nezinkampani iGrupo Sura neBancolombia. Kungenzeka futhi ngenxa yokusekelwa unomphela okutholwa yi-FNPI ngezinhlelo zayo namaphrojekthi avela kubambisene nabo besikhungo, i-Ardila Lülle Organisation (OAL).
Akekho noyedwa kubambisene nabo, osondelene nabo noma abaxhasi ongenelelayo ekumisweni, ukumenyezelwa noma ekuphathweni kwe-Award, okuwumsebenzi okhethekile futhi ozimele we-FNPI, ngaphansi kokuqondiswa koMkhandlu Wayo Olawulayo, ngokubambisana kwamajaji azimele, akhiwe ngabantu abahlonishwayo izintatheli.ezivela emazweni ahlukahlukene.
Le mithetho, evunywe nguMkhandlu Olawulayo we-FNPI, yakha imithethonqubo esebenza ocingweni lwesithathu lwe-Award, olwenzeka ngo-2015.
Umklomelo uzoklonyeliswa esigabeni esisodwa sokuhlonishwa kokwenza kahle nasezigabeni ezine zomncintiswano.
Isigaba sokubona okuhle:
UMkhandlu Olawulayo, ngesinqumo esizinzile, uzokhetha njengonqobayo -ngaphandle kwabanqunyelwe- intatheli noma ithimba lezintatheli lenkululeko eyaziwayo, ubuqotho nokuzibophezela emigomweni yomsebenzi womphakathi kwezobuntatheli, ofanele ukugqanyiswa futhi usethwe njenge isibonelo ngawo wonke umkhondo waso noma ngokunikela okwehlukile ekufuneni iqiniso noma ekuqhubekeni kobuntatheli.
Kumodi yokuncintisana, uMklomelo uzoklonyeliswa ngemisebenzi yobuntatheli eshicilelwe okokuqala ngeSpanishi noma isiPutukezi phakathi kuka-Ephreli 1, 2014 noMashi 31, 2015.
Imisebenzi yomncintiswano kumele ibhalise kungxenyekazi Yomklomelo phakathi koLwesihlanu, Mashi 6, noMsombuluko, Meyi 11, 2015.
Imisebenzi ezothunyelwa emncintiswaneni izoba ihlolwe ngezigaba ezine:
Kumlobi womsebenzi wobuntatheli obhalwe kahle kunazo zonke, oshicilelwe emaphephandabeni noma komagazini, kokubili okuphrintiwe nokwedijithali, ngeSpanishi noma ngesiPutukezi, okuvelela ukubikwa, ucwaningo nokubaluleka kwendaba.
Umbhali womsebenzi omuhle kakhulu wokuthatha izithombe, ividiyo noma ukubona ngeso lengqondo imicimbi, evelela ukusebenza kwayo okufundisayo nobuhle ekusetshenzisweni kwezithombe njengolimi olubalulekile endabeni ngemicimbi enenani lobuntatheli.
Kwintatheli noma ithimba elikhiqize njengengxenye yomsebenzi wabo wokufundisa ulwazi ucezu olungcono kakhulu noma isethi yezingcezu zobuntatheli ngobunye besihloko nokuphathwa kokuhlelwa, ukubika, ukuchaza, ukulandelela nokuxhumana nezethameli ngomcimbi noma inqubo yezindaba yamanje futhi ezithakazelisa umphakathi, okungcono okwenziwe ebangeni elisheshayo futhi kubikwa ukuthi kusetshenziswa amathuluzi amahle kakhulu obuntatheli atholakalayo.
Okwezintatheli noma ithimba elenzele futhi lasisebenzisa isinyathelo esifanelwe ukugqanyiswa njengomnikelo obaluleke kakhulu ekwenziweni kobuntatheli okungcono, ngenxa yokuthuthukiswa kwezinhlobo ezintsha zezindaba, okuqukethwe, izilimi, amathuluzi okubona idatha nezinye izinsiza , amapulatifomu noma izinhlelo zokusebenza, kanye namamodeli wokubamba iqhaza nobudlelwano nezethameli.
Inqobo nje uma belalela okuhlinzekwe yizisekelo, imisebenzi eshicilelwe enhlobonhlobo yezindaba, izingqikithi, amafomethi kanye nezisekelo, kwimidiya yezintatheli esungulwe ukuthi isebenze ngobungcweti nangokuqhubekayo ekusebenzeleni umphakathi, ingabhalisa kunoma yimuphi wale mncintiswano izigaba, noma ngabe zinentengo noma ezingezona ezentengiselwano, ezifana, ngokwesibonelo: abamemezeli bezentengiselwano noma bezemfundo; amaphephandaba noma omagazini; iziteshi zomsakazo nethelevishini, iziteshi noma iziteshi; ama-ejensi ezindaba noma izikhungo zophenyo lobuntatheli; amabhulogi, ama-microblogs, amanethiwekhi omphakathi noma izinsizakalo zobuntatheli ezisuselwa ku-inthanethi kuphela. Umqondo ofanayo uzosebenza ezinhlelweni zokwenziwa kwezintatheli.
Noma ngubani oqeda ukubhalisa uzothatha isinqumo sokuthi iziphi izigaba ezine abafuna ukuthi umsebenzi wobuntatheli ohanjiswe emncintiswaneni wahlulelwe. Akunasimo lapho umsebenzi ofanayo ungabhaliswa esigabeni esingaphezu kwesisodwa.
I-Los abawinile Kule mikhakha emihlanu, bazothola idiploma, isithombe esibaziwe kanye nesamba semali engamashumi amathathu nantathu yezigidi zamapeso aseColombia ($ 33.000.000), okuzokhokhwa, ngemuva kokudonswa kwentela esebenzayo, ngokudluliselwa kwebhange kwi-akhawunti esegameni labo., kungakapheli izinsuku ezingamashumi amane nanhlanu (45) kulandela umcimbi wokuklonyeliswa.
Ababili abazophetha ekugcineni esigabeni ngasinye somncintiswano bazothola idiploma kanye nesamba semali esiyizigidi eziyisithupha zama-peso aseColombia ($ 6.000.000), azokhokhwa ngendlela efanayo nomklomelo omkhulu.
Abazowina nabazongena kowamanqamu bazomenyelwa eMedellín, eColombia, nazo zonke izindleko ezikhokhelwe, ukubamba iqhaza emcimbini wokuklonyeliswa nasezingxoxweni nasemisebenzini ezohlelelwa ngesikhathi somcimbi wokuklonyeliswa.
Uma kwenzeka kukhishwa umsebenzi wobumbano obumbene noma owamanqamu, umuntu ovela njengommeleli wethimba lomsebenzi uzomenyelwa eMedellín futhi athole ukwedluliswa kwemali efanele. Abanye ababhali ababambisene nabo okukhulunywe ngabo embhalweni wokubhalisa, abangafika kwabayishumi (10), bangathola kulowo omele idiploma ebabonisa njengabaphumelele noma abaqedile. I-FNPI noma ababambisene nabo noma abaxhasi ngeke babhekele indlela isikhwama semali esabiwa ngayo phakathi kwamalungu eqembu.
Ukubhaliswa kwabangenele umncintiswano:
I-Los abangenele Ezigabeni ezine, kufanele babhalise kungxenyekazi yokubhalisa ye-FNPI (www.fnpi.org/premioggm), esikhathini esinqunyiwe, banikeze imininingwane edingekayo, imibhalo nezinto zokwenziwa, ngokuya ngemithetho yokuhambisa izinto zomkhakha ngamunye.
Abantu besithathu bangancoma ukuthi bancintisane, bakunikeze ngekheli le-elektroniki umklomelo@fnpi.org ireferensi yomsebenzi kanye nemininingwane yokuxhumana nabezindaba noma ababhali, ukuze iHhovisi Likanobhala Wezobuchwepheshe Lomklomelo libameme ukuba babhalise umsebenzi wabo. Imisebenzi ebhaliswe ngokuphelele ngeplatifomu yokubhalisa ye-FNPI kuphela evumelekile ukuncintisana.
I-technical Secretariat ye-Award ingaqinisekisa nomfakisicelo noma nabantu besithathu imininingwane enikezwe ukubhaliswa noma icele imininingwane eyengeziwe. Uma kwenzeka kutholakala icala lamanga noma ukunganembi okuphawulekayo, lokho kungavunyelwa kuzokwenzeka futhi uma kunjalo, isinqumo sokunikeza noma sokukhetha ukuba ngowamanqamu sizohoxiswa. Imininingwane yayo yonke imisebenzi engena esigabeni sokugcina izoqinisekiswa.
Ngomthetho wokubhalisa, abaphikisi baqinisekisa kubahleli beMiklomelo ukuthi bangabanikazi abagcwele be-copyright yemisebenzi yezintatheli nezinhlelo ezihanjiswe emncintiswaneni noma ukuthi ngaphambili bathola kubanikazi izimvume noma izivumelwano abangazidinga ukuncintisana futhi nokuvumela ukushicilelwa nokusatshalaliswa kwemisebenzi encintisanayo, ngokuya ngalezi zisekelo.
Imisebenzi noma amadokhumenti atholiwe ngeke abuyiselwe.
Amakheli asemthethweni ukuthola eminye imininingwane:
UGabriel García Márquez Foundation yeNew Ibero-American Journalism (FNPI)
Idolobha, Calle San Juan de Dios # 3-121
Ikhodi Leposi 2117
Ama-78th HISPANIC AMERICAN FLORAL GAMES (IGUATEMALA)
Ubulili: Izinkondlo, indaba kanye noveli
Umklomelo: Igolide Presea, Isikhumba kanye no-Q. 25,000.00
Vula ku: ababhali abazinze eMelika naseSpain
Ukuhlela ibhizinisi: UMasipala Ohloniphekile waseQuetzaltenango Guatemala, eMelika Ephakathi kanye neKhomishini Ehlala Njalo Yemidlalo Yezimbali YaseHispano-American
Izwe lebhizinisi lokushaya: Guatemala
Ukuhlelwa kanye nokuthuthuka komncintiswano kudluliselwe kwiKhomishini Yaphakade Yezemidlalo Yezimbali, engakhipha imithethonqubo futhi yenze izinqumo ezibona kufanelekile.
Ukwamukelwa kwemisebenzi kuvulwa ngoSepthemba 13, 2014, lapho kushicilelwa le mithetho futhi kuvalwa ngaphandle kokunwetshwa ngoLwesihlanu, Meyi 15, 2015 ngo-18: 00 PM.
Umncintiswano ubandakanya amagatsha ezinkondlo, inoveli nendaba emfushane.
IZINKONDLO: Ababambiqhaza bangethula iqoqo lezinkondlo elingashicilelwe, elinetimu yamahhala, enobude obuncane bamavesi angama-700 kanye namavesi angama-900.
INOVELI: Inoveli engashicilelwe, enetimu yamahhala, ingahanjiswa nobude obuncane bamakhasi ayi-120 kanye namakhasi ayi-160.
INDABA: Thumela umsebenzi onobude obuncane bamakhasi ayi-15 futhi ubuningi bungamakhasi angama-25.
Ihlobene nesihloko esifanayo.
Imisebenzi kumele ibhalwe ngesiCastilian, sikwazi ukubamba iqhaza kubabhali abakhuluma iSpanishi, abazinze eMelika naseSpain.
Umsebenzi obambe iqhaza kumele ungashicilelwa.
Akufanele kuchazwe noma ukuhunyushwa kwabanye abalobi.
Hhayi ngaphansi kokuzibophezela kokuhlela; kungaphrintiwe noma kusatshalaliswe ngezinto ezibonakalayo noma ezisebenza ngogesi Imisebenzi kumele ibhalwe ngeSpanishi bese obambe iqhaza kumele ayethule kanjena:
Umsebenzi ophrintwe ngefonti yasekuqaleni, ifonti ye-Arial ukhomba indawo ephindwe kabili, ephepheni losayizi wezinhlamvu (8.5 ″ x 11 ″ noma 21.5 x 28cm.), Uboshwe ngokufanele, nesembozo lapho igatsha elibamba iqhaza kulo, isihloko sikhonjiswa umsebenzi negama elingelona iqiniso.
Kumelwe engeza okuphoqelekile ikhophi elikwi-elekhtronikhi kwi-CD yediski ehlanganisiwe, ebhalwe ngaphandle ngoyinki ongacimeki lapho kushiwo khona igatsha, isihloko somsebenzi negama elingelona igama.
Izophelezelwa ngemvulophu noma nge mvulophu evaliwe equkethe:
Ishidi eliqukethe idatha yombhali: Igama nesibongo, ikheli, ubuzwe, ifoni yasekhaya, iselula, i-imeyili, kanye nenothi elifushane lomlando kanye nekhophi yekhophi kamazisi yomuntu siqu.
Kufanele futhi ufake nencwadi yokuzibophezela, ekhombisa ukuthi umsebenzi othunyelwe uzobamba iqhaza kulo mncintiswano kuphela.
Kumagatsha enoveli nezindaba ezimfishane, umbhali kufanele ahambisane nesigcino somsebenzi owethulwayo, enwetshiwe ngosayizi wencwadi.
Imisebenzi ngeke ibuyiswe noma kuthunyelwe ubufakazi bokutholwa, ngoba ekugcineni komncintiswano labo abanganqobi bazoshiswa.
Ukuxhumana nabahlanganyeli ngeke kugcinwe uma umncintiswano uvaliwe.
La Imiklomelo izobanjwa ngoSepthemba 12 2015 ngo-19: 00 kusihlwa, e-Theatre Theatre yedolobha laseQuetzaltenango.
Imbongi noma umbhali ongaveli emcimbini wokuklonyeliswa ulahlekelwa ngokuzenzekelayo ngumklomelo wemali.
Abaphumelele bazonikezwa indawo yokuhlala nokudla, kanye nezinto zokuhamba ezisuka lapho badabuka khona ziye edolobheni laseQuetzaltenango futhi okuphambene nalokho, ngaphandle kokufaka umuntu ohamba nabo, okumele bahlale edolobheni kusukela ngoSepthemba 11 kuya ku-13, 2015 emini, babambe iqhaza umhlangano wababhali (obalulekile). Ezobanjwa ekuseni ngomhlaka 13.
Amalungelo okushicilelwa kanye / noma amaroyalthi akhiqizwe yimisebenzi ekhishwayo kuzoba impahla kaMasipala waseQuetzaltenango omiselwe iKhomishini Ehlala Njalo Yemidlalo Yezimbali YaseSpanishi yaseMelika.
Abahlanganyeli Emncintiswaneni bangaphansi kwemibandela equkethwe yile mithetho kanye naleyo ekhishwe yiKhomishini.
Ucingo: (502) 78885260
Iselula (502) 47016337
Ngezikhathi zomsebenzi: casadelaculturadeoccidente@gmail.com o redperiodistas2005@yahoo.com
I-XV FLORAL GAMES "YO TALLO MI DIAMANTE" (CUBA)
Umklomelo: Amaqoqo ezincwadi, amadiploma, izimbali zezimbali kanye nokukhuthazwa kwemisebenzi yokuwina
Ukuhlela ibhizinisi: IGuantánamo Provincial Book kanye Nesikhungo Sezincwadi
Izwe lebhizinisi lokushaya: Cuba
Ungabamba iqhaza ezinganeni zomncintiswano, intsha, abantu abadala kanye nabantu jikelele abanamakhono wokudala izingoma.
Abangenele umncintiswano bazoletha inkondlo, eyokuqala namakhophi amabili, ingqikithi nesakhiwo esizosetshenziswa kumahhala. Imisebenzi izolethwa ihambisane nemininingwane yombhali: amagama nezibongo, umazisi, isikhungo somsebenzi noma sokufunda nekheli lasekhaya. Imibhalo yesandla enombhalo wesandla ofundwayo iyamukelwa.
La ukwamukelwa kwemibhalo Kuzoba seProvince Book and Literature Centre etholakala e-Emilio Giró # 951 phezulu phakathi kukaCalixto García naseLos Maceo, kusukela ngosuku okushicilelwa ngalo lolu cingo, kuze kube uMeyi 15, 2015.
Abangenele imincintiswano kumele bahambele ukufundelwa esidlangalaleni komsebenzi wabo, okuyisimo esibalulekile, ngoMgqibelo Meyi 16, 2015, ngo-9: 00 AM, eProvince Museum, eseMartí esq. kuya ePrado.
Izoncintisana ngezigaba ezintathu: izingane (ezineminyaka efika kwengu-15), abantu abasha (abaneminyaka engu-16 kuya kwengama-21 ubudala) nabantu abadala (abaneminyaka engama-25 ubudala).
Emkhakheni ngamunye, inkantolo izocubungula imisebenzi futhi izokhipha imiklomelo emithathu bese isho nokuthi iyifanele yini. Imiklomelo izobandakanya ukuqoqwa kwezincwadi, amadiploma, izimbali zezimbali kanye nokukhuthazwa kwemisebenzi yokuwina ngezikhala ezahlukahlukene zemidiya.
Ukuze uthole olunye ulwazi: Izingcingo 21-328640 noma 21-327484
Noma xhumana usebenzisa i-imeyili elandelayo: promocincpll@gtmo.cult.cu
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » Imincintiswano yezincwadi zomhlaba wonke ngoMeyi